विपिन देव काठमाडौं, १४ वैशाख
कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र र कूटनीतिलाई प्रभावित गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न किसिमको समीकरण बनिरहेका र भत्किरहेका पनि छन् । संसारका प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरूको शैली, स्वर र रणनीतिमा एकरूपता छ भने साम्यवादी र सैनिक शासनद्वारा सञ्चालित सरकारहरूका कार्यशैली पृथक छन् ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा मिडिया सरकारको कार्यशैलीलाई आलोचना गर्दै हरेक मुद्दाहरूलाई जनसमक्ष उजागर गर्छन् भने सैनिक शासनमा मिडियाको काम सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै जनतालाई सत्यतथ्यबाट आलोकित गर्दैनन् ।
कोरोना समस्याको समाधानका लागि पनि यही सूत्रको प्रयोग भएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध पनि यही परिवेशबाट प्रभावित भएको छ ।
भारत र अमेरिकाको सम्बन्धको उतारचढाव बडो रोचक देखिन्छ । विभिन्न आरोह र अवरोहमा पनि यी मुलुकहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट विचलित भएको छैन । विभिन्न मुद्दाहरूमा सहकार्य पनि भएको छ र एकअर्काको विरोधमा पनि उभिएको देखिन्छ ।
दुईवटै मुलुकहरू आन्दोलनको माध्यमबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेर प्रजातान्त्रिक गोरेटोबाट विकासको धावक भएका छन् । अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको प्रभाव भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा प्रचुर मात्रामा परेको देखिन्छ भने गान्धीको प्रभाव अमेरिकी अश्वेत आन्दोलनमा भएको देखिन्छ ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि नेहरूले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो कूटनीतिको अस्त्र बनाएर मुद्दाको आधारमा हरेक देशसँग सम्बन्धको मापन गर्ने अभ्यास सुरु गरे । यही परिवेशमा सन् १९५० मा अमेरिकाले कोरियामाथि आक्रमण गर्दा नेहरूले अमेरिकाको निन्दा गरे । नेहरूले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई एउटा आन्दोलनको रूप दिँदै गरिब र निमुखा राष्ट्रहरूको आवाजलाई ध्वनित गरे ।
सन् १९६२ मा भारतलाई चिनियाँ आक्रमणको प्रतिकार गर्नुपर्‍यो । त्यतिखेर नेहरूले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । अर्थात् चीनसँग भएको युद्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडीले नैतिक समर्थन दिए तर सामरिक र सैन्य सहयोगका लागि विभिन्न किसिमका शर्त राखे, जुन असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कसीमा उचित थिएन । भारतले हार व्यहोर्नुपरेको थियो ।
नेहरूले सन् १९६३ मा भारतलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन अमेरिकी सहयोगलाई निमन्त्रणा गरे । अमेरिकी प्राविधिक सहयोग र एसएम स्वामिनाथनको नेतृत्वले गर्दा भारत १ दशकभित्रै हरित क्रान्तिको माध्यमबाट खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भयो ।
सन् १९६५ ताका भारतको नेतृत्व लालबहादुर शास्त्रीको हातमा थियो । शास्त्री सादगी र स्वाभिमानका प्रतिमूर्ति थिए । अमेरिकाले भियतनाममा आक्रमण गर्दा शास्त्रीले अमेरिकी नीतिलाई निन्दा गरे । अर्कोतर्फ अमेरिकी नीतिको विपरीत शास्त्रीले पाकिस्तानसँग युद्ध गरेर पाकिस्तानलाई पराजय गरे ।
सन् १९५४ मा नै पाकिस्तान अमेरिकी गठबन्धनको हिस्सा भइसकेको थियो । पाकिस्तानको पराजयले भारत र अमेरिकी सम्बन्ध फेरि चिसियो । अमेरिकी राष्ट्रपति रचिर्ड निक्सनले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न आवश्यक कदम चाल्दै भारतलाई ८७ मिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग गरे ।
तर, फेरि पाकिस्तान र भारतबीच युद्ध भयो । अमेरिकाले पाकिस्तानलाई सहयोग गरे तापनि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी पाकिस्तानलाई टुक्रा गर्न सफल भइन् । तदनुरूप इन्दिरा बङ्गलादेशकी ‘धाइ आमा’ बन्न सफल भइन् । सन् १९७४ म भारतमा न्युक्लियर परीक्षण गरेर अमेरिकासँगको कटुतामा घीउ थपियो । सन् १९७७ मा भारतमा मुरारजी देसाई ठूलो जनआन्दोलन (जे.पी. आन्दोलन) को माध्यमबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।
अमेरिकाले ७० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्‍यो । सन् १९७८ मा देसाई र अमेरिकी राष्ट्रपतिले एकअर्काका देशको राजकीय भ्रमण गरे । सन् १९८० मा सोभियत संघको आक्रमण र हस्तक्षेप अफगानिस्तानमा भयो, जुन भारतीय नीतिको अनुरूप थिएन ।
भारत सोभियत संघको आलोच्य भयो, जसले गर्दा भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा केही सुधारका सङ्केतहरू देखिए । सन् १९९० मा खाडी युद्धका बेला भारतले अमेरिकाको मौन समर्थन गर्‍यो । अमेरिकी हवाई इन्धनका लागि सहयोग पनि गर्‍यो ।
सन् १९९१ म भारतले खुला अर्थव्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्‍यो । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विभिन्न अमेरिकी प्रभावमा रहेका वित्तीय संस्थानहरूको सक्रियता र सहभागिता भारतको नवउदारवाद र खुला अर्थ व्यवस्थाको अभिमानमा देखियो ।
सन् १९९८ मा भारतले फेरि न्युक्लियर परीक्षण गर्‍यो । भारतको न्युक्लियर कार्यक्रम अमेरिकी नीतिअनुरूप नभएका कारण अमेरिका भारतसँग फेरि चिढियो । विभिन्न किसिमका आर्थिक कार्यक्रम र सहयोगहरूलाई रद्द गर्दै भारतविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी गर्‍यो । यहाँसम्म कि अमेरिकाले आफ्नो राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलायो ।
सन् १९९९ मा कारगिल युद्धताका पनि भारतलाई अमेरिकाको सहयोग थिएन । भारतले अमेरिकामा आफ्नो अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा राखेको थियो । तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रमन्त्री जसवन्त सिंहले आफ्नो पुस्तक ‘माइ अनर टु नेसन’मा के प्रस्ट गरेका छन् कि अमेरिकी अधिकारी ट्रायबोट स्टोर्टले भारतको अवस्थालाई बुझ्दै भारतको प्रशंसासमेत गरेको अवस्था थियो ।
तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोन्डोलिजा राइसको भ्रमण भारतमा भएको थियो । इतिहासमा प्रथम पटक भारत र अमेरिकाको वैमनस्य मित्रतामा रूपान्तरण भयो । अर्थात् भारत र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भयो ।
सन् २०१४ मा मोदीको सत्तारोहणपछि भारत र अमेरिकाको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लियो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको भारत भ्रमण जस्ता अनेकौँ उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भारत र अमेरिकाको बीचमा भयो । ‘हाउडी मोदी’ र ‘नमस्ते ट्रम्प’ जस्ता नाराले अमेरिका र भारत सम्बन्धलाई न्यानोपन दिए ।
वर्तमान अवस्थामा दुईवटै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू कोरोनाको सन्त्रासबाट आक्रान्त छन् । कोरोनासँग जुध्न अमेरिकाले भारतलाई २.९ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ । हुनत दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकहरूलाई पनि अमेरिकी सहयोग प्राप्त भएको छ । तदनुरूप १.३ मिलियन श्रीलङ्कालाई, १.८ मिलियन नेपाललाई, ३.५ मिलियन बङ्गलादेशलाई र ५ मिलियन अफगानिस्तानलाई प्राप्त भएको छ । तर, भारतमा उच्चस्तरीय कोरोनाविरुद्ध शोधको वातावरण बनाउन अमेरिका सक्रिय भएको छ ।
भारतबाट अमेरिका हाइड्रोक्लोरोक्विन कोरोनाविरुद्धको औषधि प्राप्त गर्न छट्पटाइरहेको अवस्था छ । ३० वटा मुलुकहरूले भारतसँग औषधि प्राप्त गर्न चाहेको सार्वजनिक भएको छ । एउटा अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले आफ्नो स्वभावअनुरूप यदि भारतबाट यो औषधि नपाएको खण्डमा अमेरिकाले भारतको विरोधसमेत गर्ने धम्की दिएको पाइन्छ ।
मोदीले अमेरिकी आवश्यकतालाई महसुस गर्दै औषधि निर्यात गर्ने आधिकारिक घोषणासमेत गरेको देखिन्छ । गत १४ मार्चमा अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट माइकपोम्पियो र भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करबीच कोरोनाको कहरले अमेरिका र भारतबीचमा सहकार्यको टड्कारो आवश्यकतालाई अनुभूति गरेको देखिन्छ ।
अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका प्रवक्ता मोर्गनले प्रस्ट उल्लेख गरेकी छन् कि भारत र अमेरिकाले कोरोना समस्यालाई समाधान गर्न सहयात्रा गर्नुपर्छ ।
अमेरिका र भारत कोरोनाबाट अधिक प्रभावित भएका छन् । न्यायपालिकादेखि राज्यका विभिन्न निकायहरू कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् ।
मोदीले सार्कदेखि जी-ट्वान्टीसँग आफ्नो नेतृत्व र कृतित्व देखाएको अवस्थामा कोरोनासँग जुध्न भारतीय नेतृत्व सफल रहेको पुष्टि गर्छन् भन्ने छ ।
कोरोनाबाट भारतमा मात्र ४० मिलियन जागिर धरापमा रहेको अवस्था छ भने अमेरिकामा बेरोजगारी दर तीब्र रूपले बढिरहेको छ । कोरोनाले दुईवटै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न संवेदनशील बनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १४, २०७७, १६:३१:००